Ozinina mpamono entona voajanahary | Shina mpanamboatra entona voajanahary, mpamatsy
Fomba MDEA decarburization skid ho an'ny fitaovana fandoroana entona voajanahary
Ny decarburization entona voajanahary (decarbonization) skid, dia fitaovana fototra amin'ny fanadiovana na fitsaboana entona voajanahary.
PSA decarbonization skid ho an'ny fanadiovana entona voajanahary
TEG dehydration skid dia fitaovana lehibe amin'ny fanadiovana entona voajanahary na fitsaboana entona voajanahary. TEG tsy fahampian-drano skid ny famahanana entona dia mando entona voajanahary fanadiovana, ary ny vondrona fahafahana dia 2.5 ~ 50x104. Ny elasticité ny asa dia 50-100% ary ny fotoana famokarana isan-taona dia 8000 ora.
Ny fampiharana ny skid crystallization evaporative amin'ny fikarakarana rano maloto amin'ny orinasa fanadiovana entona voajanahary dia mila famakafakana miaraka amin'ny diagrama amin'ny dingana Na2SO4-NaCl-H2O. Evaporative crystallization dia tsy vitan'ny hoe ny dingan'ny fisarahana ny sira sy ny rano, fa koa afaka manambatra ny solubility toetra ny sira inorganic tsirairay mba hanasarahana ny inorganic sira amin'ny fomba mahomby amin'ny dingana ny evaporative rafitra crystallization.
Fitsaboana entona rambony
Entona voajanahary rambony entona fitsaboana skid no tena ampiasaina mba hiatrehana ny rambony entona ny solifara fitaovana fanarenana, ary koa ny fako entona ny ranon-javatra solifara dobo sy TEG fako entona ny tsy fahampian-drano fitaovana ny solifara fitaovana fanarenana.